အချစ် သို့မဟုတ် ခင်မင်မှုလား ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
ချစ်ခြင်းမေတ္တာလား ခင်မင်မှုလား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဒီလိုနာမည်ကြီးတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ ခံစားရတာက ပုံမှန်ပါပဲ”သူငယ်ချင်းအဖြစ်ပဲနေသည်“ သင့်ကိုယ်သင် မေးပါ- ခင်မင်မှုသက်သက်လား ဒါမှမဟုတ် တခြားအရာတစ်ခုလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ မင်းတကယ်ချစ်ကြည်ရေးဇုန်ထဲမှာလား ဒါမှမဟုတ် မင်းကိုဂရုစိုက်တဲ့လူက မင်းကိုကြည့်တဲ့အခါ ဗိုက်ထဲကလိပ်ပြာလေးတွေခံစားရလား သိချင်သလား။ သေချာစေရန်၊ အကြံပြုချက်များအတွက် ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး အမျိုးသားများစိတ်ဝင်စားမှု၏ သိမ်မွေ့သောလက္ခဏာများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်။
1 ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သို့မဟုတ် ခင်မင်ရင်းနှီးခြင်းရှိ၊ မရှိကို လက္ခဏာအချို့မှ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
1.1 1. အရာအားလုံးကိုပြောပြတယ်။
1.2 2. အခြားတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပါ။
1.3 3. သူက သင့်ကို နာမည်ပြောင်ပေးတယ်။
1.4 4. မင်းဟာ ငိုဖို့ ပခုံးပဲရှိတယ်။
1.5 5. သင့်ဘေးနားမှာ ကြောက်ရွံ့နေပါ။
1.6 6. Cupid ကဲ့သို့ ပြုမူကြည့်ပါ။
1.7 7. ခန္ဓာကိုယ်အဆက်အသွယ်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သို့မဟုတ် ခင်မင်ရင်းနှီးခြင်းရှိ၊ မရှိကို လက္ခဏာအချို့မှ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
လက္ခဏာအားဖြင့် ချစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခင်မင်မှုဖြစ်မဖြစ် သိပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ကိစ္စတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူပါဘူး။ လူတွေက တုံ့ပြန်ပုံချင်း မတူကြသလို အပြုအမူတွေလည်း မတူကြဘူး။ သို့သော် ဤသို့ဖြစ်လင့်ကစား ဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ခုခုရှိမရှိ နားလည်ရန် လက္ခဏာအချို့ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကောင်းမွန်တဲ့ ရင်းနှီးမှုတစ်ခုလား။
ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်လာပြီး မည်သည့်အသေးစိတ်အချက်ကိုမဆို အချက်ပြသည်ဟု ထင်မြင်ခြင်းမှာ အသုံးမ၀င်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင်ကြားရှိ ဓာတုဗေဒနှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုသည် မည်သည့်လက်စွဲ သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက်ထက်မဆို ပိုတန်ဖိုးရှိသည်။. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ တစ်စုံတစ်ဦးကို စိတ်ဝင်စားသောအခါတွင် လူအားလုံးတွင် ထင်ရှားပေါ်လွင်သော အချက်အချို့ကို ညွှန်ပြခြင်းသည် အမြဲကောင်းသည်။
အမြဲတမ်းတွေးကြည့်ပါ- သင်ဟာ သင့်သူငယ်ချင်းနဲ့ သူတို့ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အခါ စကားပြောချင်သူတစ်ယောက်လား။ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဇုန်ထဲမှာ သင်တကယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိလေသာ အပြန်အလှန် ယှဉ်သော အခါ၌လည်း ရှိ၏၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုနှင့် စိတ်ခံစားမှုလေထု. ဒါကြောင့် အမြဲလိုလို သင့်ဘဝမှာ ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးကို မျှဝေပါ။ သင်နှင့်အတူ၊ သူသည် သင့်အား အထင်ကြီးစေရန် သို့မဟုတ် ထိုမျှော်လင့်ထားသည့် ခံစားချက်ကို ဖန်တီးရန် အနည်းငယ်မျှ အားထုတ်နေမည်မဟုတ်ပေ။ လောက်နီးပါး မင်းကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်သာတွေ့မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးတဲ့အခါ ခင်မင်မှုသက်သက်လား ဒါမှမဟုတ် တခြားအရာတစ်ခုလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဤသည်မှာ တစ်စုံတစ်ဦးမှ သင့်ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် ရှုမြင်ကြောင်း အထင်ရှားဆုံး လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။ တခြားသူနဲ့ ချစ်မိနေပြီလို့ စပြောလာရင်တော့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဇုန်ထဲ ရောက်နေပါပြီ။ မင်းသူ့ကို စိတ်ဝင်စားဖို့တောင် မတွေးဘဲ မေတ္တာပါသော အကြံဉာဏ်တောင်းတဲ့အခါ ဒီလိုပါပဲ။
3. သူက သင့်ကို နာမည်ပြောင်ပေးတယ်။
သူဒီလို အမျိုးအစားဆိုရင် "ညီမ သို့မဟုတ် အစ်ကို" ကဲ့သို့သော ချစ်စရာအမည်ပြောင်များဖြင့် သင့်ကို ခေါ်သည်မျှော်မှန်းမရနိုင်သော အနာဂတ်အတွက် သင့်ဘက်မှ ကြီးမားသော စိတ်အားထက်သန်မှုကို သင်ခံစားရမည်မဟုတ်ပေ။ ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးက သင့်ကို စိတ်အားထက်သန်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မမြင်နိုင်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး၊ အခုချိန်မှာ သင်ဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေပါပြီ။
4. မင်းဟာ ငိုဖို့ ပခုံးပဲရှိတယ်။
သင်ဟာ ချစ်ကြည်ရေးဇုန်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နောက်ထပ်သတိပေးချက်တစ်ခုကတော့ အခြားဆက်ဆံရေးတစ်ခု ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ အဲဒီလူက သင့်ဆီကို လှည့်လာတဲ့အခါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြောင့် ဤအခြေအနေများကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ငိုဖို့ ဖော်ရွေတဲ့ ပုခုံးလေး ထားလိုက်ပါ။ ကိုင်တွယ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ။
5. သင့်ဘေးနားမှာ ကြောက်ရွံ့နေပါ။
ဒါက ချစ်ကြည်ရေးဇုန်ရဲ့ နောက်ထပ် ပုံမှန်လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ အချစ်ရေးမှာ ခံစားချက်ရှိတဲ့အခါ စိတ်ရှုပ်တတ်တဲ့လူ။ အကယ်၍ သူစိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပုံရပြီး ရယ်စရာမဟုတ်သည့်အရာများကို စတင်ရယ်မောနေပါက သို့မဟုတ် သင့်ကိုအထင်ကြီးစေရန် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကြိုးပမ်းပါက၊ ဤချစ်ခင်မှုသည် အပေါင်းအသင်းအဖြစ်သို့ ကျော်လွန်သွားနိုင်သည့် လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေးတစ်ခုတွင်၊ လူသည် အခြားသူတစ်ဦးအား အထင်ကြီးစေရန် သို့မဟုတ် ကျေနပ်စေရန်ကြိုးစားရန် မကြိုးစားပါ။
ခင်မင်ရင်းနှီးမှု၏ နောက်ထပ်ဂန္ထဝင်လက္ခဏာမှာ သူပြောသည့်စကားအပေါ် သင်မည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကို အနည်းငယ်မျှ စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲ ပြောသောအခါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်မည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကို စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။
6. Cupid ကဲ့သို့ ပြုမူကြည့်ပါ။
ခင်မင်မှုသက်သက်လား ဒါမှမဟုတ် တခြားအရာတစ်ခုလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဒီလက္ခဏာက ရိုးရှင်းပါတယ်။ မင်းနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောနေတာလား။ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းတွေ့ဖို့ ကြိုးစားဖူးလား။ နောက်ထပ်သတိပေးချက်တစ်ခု။ ထို့ကြောင့်၊ ထိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အမြဲအာရုံစိုက်ပါ သို့မဟုတ် အပြင်ထွက်သည့်အခါတွင် သင်သည် ပြီးပြည့်စုံသောကိုက်ညီမှုရှိသည်ဟု သင်ထင်သောကြောင့် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကို ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ခံစားချက်ချင်းက အပြန် အလှန်ရှိတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုကို ရှာပါ။ဂိမ်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးဖို့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိရင်တောင် သင့်အတွက် ဘယ်တော့မှ ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ရင်၊ သူက ပိုထူးခြားတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိတာကြောင့်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားက တစ်ဖက်လူအကြောင်း အများကြီးပြောပေမယ့် အဲဒါကို အာရုံစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လုပ်သမျှအရာအားလုံးသည် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်လာနိုင်ပြီး မည်သည့်အရာမျှမရှိသည့်သဲလွန်စများကိုတွေ့မြင်နိုင်သောကြောင့် အမြဲတမ်းသတိထားပါ။